Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea barbaraha la dhaafi weysay kooxda Burnley – Gool FM
(London) 23 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xalay iska lumisay fursad ay ku geli kartay kaalinta saddexaad ee horyaalka kaddib barbaro 2-2 oo ay la dhaafi weysay dhiggeeda Burnley.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge kana tirsanaa horyaalka Premier League ayaa ku dhammaaday barbaro 2-2, waxaana Blues labada gool ee kulankan u kala dhaliyey Kante 12’daqiiqo iyo Higuain 14’daqiiqo, halka kooxda martida ahayd ee Burnley ay labada gool ka kala heshay Hendrick 8’daqiiqo & Barnes 24’daqiiqo.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa qaar ka mid ah rikoorraddii laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Chelea ayaa kaliya hal guuldarro la kulantay 21-kii kulan ee ay horyaalka Premier League maalin Isniin ah ku ciyaartay garoonkeeda Stamford Bridge, waxaana ay qaadatay 15 guul iyo 5 barbaro marka ay horyaalka ku ciyaareyso maalin Isniin ah garoonkeeda, guuldarradaas kalaiya ayaana ahayd tii 2-3 ee Manchester United ka soo gaartay 1994-kii ee Boxing Day markaasoo uu kooxda hoggaaminayey Glenn Hoddle.
>- Tan iyo guushoodii 3-2 ee ay wajaheen Chelsea xilli ciyaareedii hore, Burnley ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto mid kasta oo ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League meel ka baxsan garoonkeeda kula soo ciyaarto kooxaha big six la yiraado, waxaana ay ka haysataa 5 barbaro iyo 6 guuldarro.
>- Chelsea ayaa labo gool looga dhaliyey garoonka Stamford Bridge kubbadaha geesaha laga soo qaado hal xilli ciyaareed horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii May sanadkii 2011-kii, markaasoo ay ka horjeedeen Newcastle.
>- Goolkii furitaanka ee Jeff Hendrick oo Burnley uu dhaliyey kulankan ayaa ahaa goolkii 1000-aad ee Chelsea laga dhaliyo horyaalka Premier League, waana kooxdii sagaalaad ee sidaan oo kale kun gool laga dhaliyo tartankan.
>- Eden Hazard ayaa sameeyey 13 caawin horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2018-19, waana heerkiisii ugu fiicanaa tartanka xilli ciyaareedkan, isagoo hal caawin dheer gool dhiibistii loo diiwaan geliyey marka la isku daro wadar ahaan saddexdii xilli ciyaareed oo la soo dhaafay oo uu sameeyey 12 caawin.
>- N’Golo Kante ayaa dhaliyey afar gool 34 kulan oo uu horyaalka Premier League ciyaaray xilli ciyaareedkan, waxaana uu hal gool ka badan yahay marka la isku daro saddexdii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay tartankan oo loo diiwaan geliyey kaliya saddex gool 106 kulan oo uu isku dar ciyaaray horyaalka.
>- Ashley Barnes ayaa dhaliyey 11 gool horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana intii ugu badnayd oo uu ka sameeyo ciyaaryahan kooxda Burnely ah hal xilli ciyaareed tartankan, sidaan oo kalena waxaa horay u sameeyey Danny Ings xilli ciyaareedkii 2014-15.
>- Weeraryahanka Chelsea ee Gonzalo Higuaín ayaa dhaliyey 10 gool ama wax ka badan kulammada horyaalka 11-kii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub, xilli ciyaareedkan 2018-19 waxa uu Chelsea u dhaliyey 4 gool, halka AC Milan uu horyaalka u saxiixay 6 gool.